‘टन्सिलले निम्त्याउन सक्छ मुटुरोग’ « Mayadevi Online News Portal
प्रकाशित मिति : २५ आश्विन २०७७ आईतवार १३:२५
घाँटीमा व्याक्टेरियाको सङ्क्रमणबाट टन्सिल हुने गर्छ । टन्सिललाई हामीले सामान्य रुपमा लिएर खासै उपचार गर्दैनौँ । त्यही हेलचेक्रयाइँ नै पछि मुटु जस्तो संवेदनशील अङ्गमा जटिल प्रकारको रोग लाग्न सक्छ । यस्तो समस्याले धेरै मानिसको अकालमा ज्यान गुमाउनु परिरहेको चिकित्सकले बताएका छन् ।
मुटुरोग विशेषज्ञ डा= प्रकाशराज रेग्मी झण्डै ९९ प्रतिशत मानिसलाई यस कुराबारे थाहा नभएको दाबी गर्नुहुन्छ । डा। रेग्मी एक सय रुपैयाँमा उपचार हुने टन्सिलको सही उपचार नगर्दा तीनलाखसम्म खर्च लाग्ने मुटुरोगको जटिल समस्याबाट प्रभावित हुने गरेको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार प्रायः यस्तो समस्या पाँचदेखि १५ वर्षसम्मका बालबालिकामा हुने गर्दछ ।
यस्तो समस्या देशका विपन्न परिवारमा रहेकाले यस विषयलाई चित्रण गर्दै उहाँले ‘टन्सिलले बिगारेको मुटु’ नामक पुस्तक बजारमा ल्याउनुभएको छ । नेपाल हृदयरोग निवारण प्रतिष्ठानले शनिबार काठमाण्डौमा यस पुस्तकबारे गरेको अन्तर्क्रियामा डा. रेग्मीले आमनेपाली सचेत हुन सकुन् भन्ने उद्देश्यले पुस्तक प्रकाशित गरेको बताउनुभयो ।
साहित्यकार श्रीओम ‘रोदन’ले बाथ-मुटुरोग गरिबी र अशिक्षाबाट प्रभावित बालबालिकाका लागि ठूलो समस्या भएको बताउनु भयो । यस रोगका कारण नेपालमा वर्षेनि एक हजार बालबालिकाको ज्यान जाने गरेको जनाइएको छ । वार्षिक ८०० मानिसको यही रोगको कारणले मुटुको भल्भ फेर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । हजारौँ मासिन यस रोगबाट प्रभावित रहेका छन् ।
सामान्य टन्सिल रोगका कारण उत्पन्न हुने बाथ-मुटुरोग बारे देशका ९९ प्रतिशतलाई जानकारी नभएर यो रोग छायाँमा परेकाले जनचेतना जगाउन पुस्तकका माध्यमबाट यो प्रयास गरिएको डा। रेग्मी बताउनुहुन्छ । पुस्तकमा उहाँले बाथ-मुटुरोगका विविध पक्षका बारेमा सरल भाषामा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
केटाकेटी समयमा घाँटी दुख्ने र टन्सिल हुने अवस्था आउँछ । नेपाल हृदयरोग निवारण प्रतिष्ठानका संस्थापक कोषाध्याक्ष डा. खेम कोइरालाले पुस्तकको बिक्रीबाट आएको रकम बाथ­मुटु रोग रोकथामका लागि स्थापित अक्षयकोषमा जम्मा हुने जानकारी दिनुभयो । विगत ३३ वर्षदेखि मुटु रोगको उपचारमा संलग्न डा.रेग्मीका झण्डै एक दर्जन पुस्तक प्रकाशित छन् । (रासस)